Azo atao ve ny manaiky ny fampinonoana ny mama - Persimmon amin'ny fampinonoana, ny toetra amam-panahy, ny karazam-pitiavana
Manodidina ny fanontaniana raha azo atao ny miteraka renim-pianakaviana, misy angano maro. Misy mihevitra fa mety hampidi-doza ho an'ny reny sy ny zazakely izany. Ny hafa, raha jerena ny toetra mahasoa ataon'ny olona, ​​dia mino fa tokony ho eo am-pelatanan'ny mpanampy izy. Na dia izany aza, mba tsy hanimba ny pensilihazo dia mila mandalina ny toetoetran'ny foetus ianao.
Persimmon - fananganana sy fananana
Io voankazo voajanahary io dia manamarika ny tsiro mahafinaritra sy malefaka. Manana akora simika manan-karena izy:
Glucose sy fructose. Amin'izao voankazo tropikaly izao, ny sotro voajanahary dia tsy manome azy fofona mahafinaritra, fa manetona ny vatany amin'ny angovo izay ilain'ilay reny tanora be dia be. Na izany aza, miaraka amin'ny votoatin'ny glucose avo, ny berry dia manary sakafo. Ny vidiny angovo dia 70 kcal. Tsy hahomby ny fakana aina mandritra ny fiterahana.
Tandin-damosina sy fitaratra. Ny Fiber dia tena manan-danja tokoa amin'ny fikarakarana tanteraka ny rafi-pandaminana. Misy vokany mavesatra izany. Na izany aza, amin'ny tandindona dia misy ihany koa fanantenana: mihaona izy ireo. Noho io singa sarobidy io, ny fihetsiky ny foetus dia mety ho hafa tanteraka. Ny vokatra dia miankina amin'ny toetran'ny olona tsirairay sy ny fivalanan-tsakafo.
Vitamin Complex. Ao amin'ny 100 g ny voankazo dia misy 66 mg ny solontenan'ny vondrona C - mihoatra ny antsasaky ny fepetra takiana isan'andro izany. Ity singa ity dia manampy amin'ny fanamafisana ny hery fiarovana. Ankoatra izany, ny berry exotic dia manankarena vitamin PP, izay tompon'andraikitra amin'ny hatsarana sy ny fahasalamana amin'ny fantsika sy ny volony. Misy koa solontenan'ny vondrona A, izay manohana ny fahitana. Rehefa mandinika an'io tranobe vita amin'ny vitaminina maro be io ny olona iray, dia misy faniriana miteraka.
Ireo singa mineraly. Ny voankazo hafakely dia feno kalcioma. Ny fitomboany dia mahatratra 27mg ho an'ny 100g persimmon. Ity mineraly ity dia tena manan-danja tokoa ho an'ny taolana taolana. Ankoatra izany, dia misy ao amin'ny voankazo sy magnesium, izay manara-maso ny rafi-panafody. Berry sy vy manankarena - singa iray manakana ny fivoaran'ny anemia.
Ny toetra fanampiny:
Fiarovana ny taratasy mivalona ho an'ny digestive avy amin'ny E. coli;
fanamafisana ny atidoha;
mampitony ny rafi-pitabatabana;
fanasitranana ny androbe ny tiroida;
fiarovana ny rafi-panavaozana sy ny sisa.
Azo atao ve ny manenjika rehefa mampinono?
Ny fandraràna ny fanatrehan'ity ronono ity amin'ny fikarakarana ny renim-pianakaviana iray dia matetika manazava amin'ny mety hisian'ny adidy ao amin'ny tsinay. Ity tahotra ity dia kely loatra. Ao amin'ny voankazo hafakely dia misy fibra lehibe. Izy ireo, toy ny borosy, dia mamafa ny "fako" amin'ny tsinay. Na izany aza, raha misy mpitsabo mpanampy mandalo amin'ny fandidiana mivalona, ​​dia mihinana sakafo tsy azo antoka ho azy. Rehefa tapitra ny fandidiana, dia tapaka ny peristalsis, ka mety ho very vatana ny vatana ary mety hijanona ao anaty tsinay.
Ny sasany dia nisalasala raha azo atao ny manararaotra ny GW, satria mety hiteraka fikorontanana eo amin'ny reny sy ny rambony. Na izany aza, dia tsy mitovy ny vokany mampihetsi-po amin'ity voankazo ity: mihamalemy ny voankazo. Ny tinainy amin'ny farafaharatsiny dia tsy feno tanteraka. Raha mamony ny voankazo, dia misy tasy kely vitsivitsy. Ankoatr'izany, ny voankazo masaka dia misy vokany mampidi-doza.
Ny olana, na mety hitranga izany rehefa misy reny mampinono, dia mety hipoitra noho ny alahelom-pon'ny bevohoka. Na izany aza, io voangory io dia tsy ny vokatra tokana afaka mampiteraka zaza toy izany. Ny fambolena zava-mahadomelina dia koa ny voanjo, tantely, sôkôla ary ny sisa. Ny fihenan'ny sombin-tsolika mankany amin'ny voankazo dia miankina amin'ny fitiavan-janany, ny rafitra fiarovana ary ireo antony hafa.
Azo atao ve ny mihinana karazam-borona mamelona zazakely vao teraka?
Ny sakafo dia ao anatin'ny volana voalohany aorian'ny nahaterahana dia tena henjana. Ny fampidirana ny vokatra vaovao ho an'ny sakafo ao an-tranon'ny renim-pianakaviana dia tsy maintsy atao ihany rehefa manaiky izany miaraka amin'ny dokotera. Ankoatra izany, ny vehivavy dia tokony hanaraka izany fanoloran-kevitra izany:
Hifanaraka hatramin'ny roa na telo volana izay efa antitra avy amin'ny fihinanana io voankazo matsiro io. Persimmon rehefa miala sasatra ny zaza vao teraka dia tsy tokony ho hita ao.
Aza mihinana ity voankazo ity raha marary na voan'ny vaksiny.
Azo atao ve ny manosotra tebiteby rehefa mampinono?
Ny voankazo nohosorana avo dimy heny noho ny voankazo kalorie misy voankazo vaovao. Na izany aza, voatahiry be ny vitamina, mineraly ary ireo singa sarobidy hafa. Voaro noho ny reny tanora iray, ny tebiteby maina amin'ny fampinonoana dia tokony ho kely noho ny vao mainka. Ny iray amin'ireo voankazo maina ao amin'ny sakafo amin'ny vehivavy mpitsabo dia tokony ho avo 4-5 heny noho ny fihinanana ny voankazo.
Ahoana ny fisafidianana toetrandro?
Mba hiarovana ny tenany sy ny totozy, i Mama dia tokony handray andraikitra amin'ny tompon'andraikitra izay karazan'aretina azony. Ity ny fomba hisafidianana karazana fitandremana marina:
Color - pale dia manondro fa tsy voatery ny voankazo. Mba hividianana berry toy izany na tsia - dia ny vehivavy, fa raha azo atao ny mihinana sakafo ho an'ny reny mampinono, raha tsy maniry ny voankazo, - mazava ho azy tsy. Afaka mividy ny voankazo izy ary mamela azy mandritra ny andro vitsivitsy. Ka dia ho ripaka haingana izy.
Ny fisiana toerana sy teboka dia famantarana ny fizotran'ny fahaverezana na ny fangalarana ny voankazo.
Ny hatsaran-tarehy sy ny tsiro amin'ny voankazo dia miankina amin'ny toeram-pambolena sy ny fahamatorana. Ireo ray aman-dreny dia manoro hevitra fa amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona dia iray ihany no nampiasaina tany Crimée na tany atsimon'ny firenena. Ny fanodinana azy dia mifanaraka amin'ireo GOST ankehitriny. Na azo atao ve ny mamono mamano mba hampiasana marika isan-karazany? Ao anatin'io sakafo io dia mety maniry toy izany:
Ahoana ny tokony ho fihinanana sakafo?
Mba tsy hanimba ny zaza dia tokony ho levona ny voankazo. Mba hamaritana ny fomba fihinanana ny fikarakarana manokana rehefa mampinono, dia hanampy ireo fitsipika ireo:
Tsy misy afa-mamy fotsiny.
Azo atao ve ny mandringana ny renim-pianakaviana tsy misy fetra? Tsia, ny fitsipika dia mihoatra ny 300 g isan'andro. Sambany izao, ny dosage azo ekena dia 1/6 amin'ny voankazo.
Aza mihinana amin'ny vavonin'ny vazivazy.
Araho ny fihetsiky ny zazakely.
Azo alaina ho an'ny renim-pianakaviana ve ny voaloboka?
Sakam-boankazo vita amin'ny mofo
Antibiotika nahazoan-dalana ho an'ny fampinono
Ahoana ny fiterahana?
Mamahana ilay zaza mandritra ny volana maro
Natao ny ambangovangony
Helminths amin'ny olon-dehibe - famantarana sy fitsaboana
Sakafo maraina avy amin'ny atody
Ahoana ny fomba hisasarana ny kisoa?
Ultimiase peeling - instant renewable skin
Zhanin sy endometriozy
Marc Jacobs dia nanao sipa nanolotra tanana sy fo
Ahoana no anaovana ny ultrasound ny voa?
Chondroprotectors amin'ny taranaka vaovao
Park an'ny Ligin'ny Arabo
Aiza no hankanesana any an-dranomasina amin'ny volana aogositra?